Gbasara Anyị | Shijiazhuang Senlai Bubata na Mbupụ ahia Co., Ltd.
Shijiazhuang Senlai Bubata na mbupụ ahia Co., Ltd. nke e guzobere na 2012, dị na Shijiazhuang City, Province Hebei. Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke ụmụaka uwe, ngwaahịa izute oeko-tex 100 larịị 1 asambodo.
The ụlọ ọrụ gafeworo imewe echiche, na-atọkwa mmepụta technology na ike mkpara otu. Ọ nwere nnukwu ewu ewu na aha ọma na ahịa mba ụwa, a na-erekwa ya nke ọma na mgbago ugwu Europe na North America. The ụlọ ọrụ na-ekewa azụmahịa ngalaba, iji management ngalaba, sample nhazi ngalaba, ákwà ịzụta ngalaba, Onye ọ bụla ngalaba nwere a nlezianya na doro anya nkewa nke ọrụ, n'ihi na uwe akwa, ngwa, bọtịnụ na akụkụ ndị ọzọ na-nditịm-achịkwa, ezi mma bụ anyị mbụ ịchụso.
Shijiazhuang Senlai Bubata na Mbupụ ahia Co., Ltd., nke e guzobere na 2012.
Anyị mmepụta ikike karịrị 200000 iberibe kwa ọnwa.
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke ụmụaka uwe, ngwaahịa izute oeko-tex 100 larịị 1 asambodo.
Anyị na-agbasoro "iguzosi ike n'ezi ihe, mmeri-mmeri, ihe ọhụrụ, pragmatị" nzube azụmahịa.
Shijiazhuang Senlai ibubata na mbupụ ahia Co., Ltd. isi ngwaahịa bụ ụmụaka raincoat, nwa na-ehi ụra akpa, nwa bib na ọhụrụ nwa uwe. Anyị mmepụta ikike karịrị 200000 iberibe kwa ọnwa. The ụlọ ọrụ nwere ọkachamara imewe pesonel, uwe ákwà ị nweta pesonel, ọkachamara sample mmepụta pesonel. Ndị ọrụ na-emepụta uwe nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ọrụ ọrụ uwe, mara nke ọma njirimara nke ngwa ngwa akwa dị iche iche, mara mkpa nke ngwaahịa dị iche iche na akwa na ụkpụrụ ahụ. Maara nile di iche iche nke uwe efere Ndinam, usoro ọnọdụ, ụkpụrụ na size, ọkọlọtọ ọnọdụ na mmepụta usoro, na ike mezue mmepụta nke ọ bụla imewe sample dị ka mmebe chọrọ. Anyị emeela azụmahịa na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ. Dị ka a set nke uwe imewe, mmepụta, ọrụ na otu nke ọkachamara uwe ụlọ ọrụ, anyị mgbe niile rube isi na "iguzosi ike n'ezi ihe, mmeri-mmeri, ọhụrụ, pragmatic" azụmahịa nzube. Na-atụ anya ịzụ ahịa enyi na enyi na ụlọ ọrụ uwe ndị ọzọ.
A na-ekesa ndị ahịa anyị na mgbago ugwu Europe na Europe. Dịka ọmụmaatụ, Denmark, Finland, Norway, Iceland, Germany, France, Japan na ebe ndị ọzọ. N'ihi ihu igwe, ihu igwe na ihe ndị ọzọ na mba ndị a, ọ dabara adaba maka ụdị uwe anyị. N'ezie, Shijiazhuang Senlai na-ebubata na mbupụ ahia Co., Ltd. nabatara ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ịjụ ajụjụ, anyị ga-enye gị ọrụ na-eju afọ.
Dị ka a set nke uwe imewe, mmepụta, ọrụ na otu nke ọkachamara uwe ụlọ ọrụ, anyị mgbe niile rube isi na "iguzosi ike n'ezi ihe, mmeri-mmeri, ọhụrụ, pragmatic" azụmahịa nzube. Na-atụ anya ịzụ ahịa enyi na enyi na ụlọ ọrụ uwe ndị ọzọ.